Musiibo iyo Baraha Bulshada | Martech Zone
Musiibo iyo Baraha Bulshada
Isniin, Disembar 17, 2012 Isniin, Disembar 17, 2012 Douglas Karr
Inbadan oo idinka mid ah shaqsi ahaan ima garaneysaan, laakiin dhab ahaan waxaan ku soo barbaaray magaalada Newtown, Connecticut. Waa magaalo yar oo la yaab leh oo si weyn u koray laakiin aan wax badan iska beddelin tan iyo markii aan ku noolaa halkaas. Markii aan yaraa, waxaan u baahnaan jirnay inaan ku aragno filimada Aqalka Dawladda, booqashada Cunnada Buluugga ah ee loo yaqaan 'Ice cream', oo aan aadi jirno kaniisadda St. Rose ee Lima. Bulshadu way isku tashatay… Aabbahay wuxuu xitaa ku jiray waaxda dab-demiska ee iskaa wax u qabso ah markii aan halkaas ku noolayn. Dad weyn, beel aan caadi ahayn.
Mid ka mid ah saaxiibadeena qoys ayaa leh wiil noloshiisa looga badbaaday masiibadan - kulligeen waan u ducaynaynaa iyaga iyo qoysaskii wax badan ku lumay dhacdadan naxdinta leh.
Markay wax sidan oo kale ah dhacaan oo ay ku jiraan arrin muran iyo siyaasad leh sida qoryaha, waxaa jirta khatar dhab ah oo ku lug leh ka hadalka ama ku darista aragtidaada khadka tooska ah. Murannadu si dhakhso leh ayey u soo bixi karaan xanaaq iyo xitaa nacayb markii qof muujiyo aragtidiisa siyaasadeed maadaama dhibbanayaasha arrintan aan weli la nasan.
Waxaan rabay inaan tuuro talooyin aan isleeyahay waa u muhiim shirkadaha iyo shaqsiyaadka labadaba:
Markaa aamuska waxay noqon kartaa jawaab ku habboon. Saaxiib wanaagsan Chuck Gose tilmaamay in NRA waxay xireen boggooda Facebook waxayna joojiyeen cusboonaysiinta akoonkooda Twitter. Ma aaminsani inay jirto jawaab ka wanaagsan tan la siiyay xaaladda. Shirkado badan ayaa u maleynaya inay tahay shaqada PR inay soo saarto qoraal. Waan diidanahay Mararka qaar waxa ugu fiican ee aad sameyn kartaa waa inaad aamusnaato.
Wadaagistaada opinion wuxuu kuu furayaa inaad wax weerartid. Caddaan ah oo fudud, inaad naftaada dhinac udhigto dood ama mid kale ayaa dhali doonta jawaab. Haddii aad leedahay fikrad adag hal dhinac ama mid kale oo aad ku dhawaaqdo - ha la yaabin inaad si furan u weerartid, ku jees jeesaan, aad u kororto ama aad leedahay fikrado kale oo xamaasad leh oo gadaal loo tuuro. Wadaagida fikirkaaga ayaa u baahan qaan-gaarin. Haddii aadan u bislayn inaad jawaabteeda wax ka qabato, naftaada ha u furin weerarka.
Dood wax soo saar leh. Warbaahinta bulshada ayaa bixisa habab lagu khilaafo dadka iyadoo wali ay labaduba daneynayaan natiijada ugu dambeysa. Waxaan arkay doodo aan caadi ahayn oo ku saabsan wax ka beddelka 2aad, cudurka maskaxda, sheekooyinka geesinimada, iyo farriimaha jacaylka iyo taageerada maalmihii ugu dambeeyay.
sugitaanka waa tab kale. In kasta oo jawaabaha bulshada ay sida caadiga ah ugufiicanyihiin marka ay jirto jawaab deg deg ah, dhacdooyinka siyaasadeed ee lagu soo oogay sidan oo kale waxay ubaahan karaan istiraatiijiyad kale. Waxaan joojiyay Tweet-ga oo waxaan xaddiday ka-qaybgalka Facebook. Waxaan sidoo kale sugayay inaan dhajiyo tan dhowr maalmood si aan uhelo wax wax ku ool ah oo aan dhaho halkii aan ku dari lahaa qaraxyada fikradaha, doodaha iyo doodaha halkaas ka jira. Haddii aad sugi kartid illaa dadku yara yara qaboojiyaan, wadahadalka ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid wax dhisaya.
Warbaahinta bulshada waa a dhexdhexaad. Si toos ah ulama hadlaysid qofka kale. Waa hab isgaarsiineed halkaasoo fariintaada loo galiyo dadweynaha si loo baaro, iyadoo aan loo eegin meesha aad ku dhejiso. Warbaahintu waxay siisaa shabakad badbaado kuwa doonaya inay samaan sameeyaan, iyo gaashaan ay ugu gabadaan kuwa doonaya inay xumaan falaan.
Markii uu qaraxa guriga ka dhacay halkan Indianapolis, waxaan arkay wax kasta oo wanaagsan oo baraha bulshada laga dheehan karo. Waxay siisay dhexdhexaad dhexdhexaad ah, warar, iimaan, farriimo rajo waxayna u keentay caawimaad dhab ah kuwa ku lugta leh.
Waxaan ku rajo weynahay, in kasta oo ay jiraan doodda siyaasadeed, in baraha bulshada aakhirka ay noqon doonaan xoog wanaag loogu bogsiinayo bulshadaan. Waxaan mar hore daawaday sida saaxiibbaday Newtown ay u adeegsadeen Facebook inay la wadaagaan dareenkooda, rajo beelkooda, rajadooda iyo farxadooda in wiilkoodu nool yahay. In kasta oo aannaan iska xoori karin waxyaabaha waalan, haddana waxaan rajeyneynaa inaan baran karno sida loogu isticmaalo dhexdhexaadka wanaagga. Ama baro marka aanad u isticmaalin haba yaraatee.
Tags: magaalada cusubmusiibo baraha bulshada
Qorshooyinka Fasaxa ee Tablet & Mobile Shoppers
17, 2012 at 9: 23 PM
Faallooyin wanaagsan Doug! Waxaan xasuustaa in aan ogaa in aad ku soo kortay gobolka Connecticut laakiin gabi ahaanba ma aadan ogayn inay ahayd Newtown. Waad ku mahadsantahay wadaagida aragtiyahan akhristayaashaada iyo bulshada guud ahaan.
17, 2012 at 10: 06 PM
Mahadsanid @bnpositive: disqus. Marnaba kuma fikirin in qof waligiis maqli doono wax ku saabsan Newtown, CT. Waa arin yaab leh daawashada ay ka muuqato wararka oo aan arko saaxiibada qoyskeyga oo ka hadlaya sida ay wax u socdaan.
17, 2012 at 11: 01 PM
Khatarta kale ee ah in lagu quusto doodaha warbaahinta bulshada ee sheekooyinka murugada leh ayaa ah inay la kulanto sidii dhiig-miirasho - sida marka weriyeyaashu ay makarafoonka ku mudayaan wajiga qof uun waayey qof uu jeclaa. Aamusnaanta ayaa badanaa ku habboon.
19, 2012 at 12: 57 AM
Waxaan ku noqon karnaa sidaas mob-ku-saleysan warbaahinta bulshada. Saacado kooban oo maalintaas ah waxaan moodaynay inuu yahay walaalkii. Bal ka fikir haddii wadayaasha baska uu si waalli ah ugu soo qoro tweet-ka ay aqrin lahaayeen tweets-ka iyo haddii tooganayahu weli nool yahay. Way ka sii xumaan lahayd.
Iyo Richard Engel. Waan arkaayaa sababta NBC u gelisay ciqaab warbaahin ah isaga illaa la sii daayay. Haddii ay si dhakhso leh u daatay yaa og waxa ku dhici kara isaga.
Bahda warbaahinta bulshada waxay bilaabaan inay toogtaan wax kasta oo sheeko ah oo ay maqlaan wakaaladaha wararka waxay bilaabaan inay ka boodaan talaabooyin ay kusii wadaan isla markaana ay ku ilaashadaan xawaaraha ay ku jiraan, iyagoo u wareegaya warbaahinta ku saleysan cafiska sida inay yihiin wakaalad suuq geyn dhuumaalaysi ah si ay ula xiriiraan maal galiyaashooda. Joog jeexjeexa
Muhiimad gaar ah - waa ku faraxsanahay asxaabtaada iyo qoyskaaga inay ka badbaadeen rooga wareega ruushka ee #Newtown jimcihii. Xaaladda kama dhigeyso mid naxdin leh mana aha qaaddo sonkor ah si looga caawiyo daawada inay hoos u dhacdo laakiin ugu yaraan dhammaan waa sheegi karaan sheekadooda oo way sharfi karaan kuwa 27 (loo maleynayo 28 wadarta dhimashada - 1 oo magaciisu dib dambe looma hadlaayo).
Adigana waan ku garanayaa, bromance, waxaad ku maamuusi doontaa qaab ahaan.
La socodsii waxa aan sameyn karo si aan u caawiyo, gaar ahaan haddii ay ka badnaan karto kuwa leh Twitter & Facebook!
20, 2012 at 6: 46 AM
Kani waa blog macluumaad badan & waxaan ka helay aqoon aad u wargelin ah bloggan. Fadlan sii wad dhajinta